ပရိတ်သတ်တွေ အံ့သြသွားအောင် အလန်းစားပုံစံလေးတွေနဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး အလင်းပြလိုက်တဲ့ ပက်ထရစ်ရှာရဲ့ ပုံရိပ်ဆန်းများ – Shwe Ba
Homepage / Cele News / ပရိတ်သတ်တွေ အံ့သြသွားအောင် အလန်းစားပုံစံလေးတွေနဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး အလင်းပြလိုက်တဲ့ ပက်ထရစ်ရှာရဲ့ ပုံရိပ်ဆန်းများ
ပရိတ်သတ်တွေ အံ့သြသွားအောင် အလန်းစားပုံစံလေးတွေနဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး အလင်းပြလိုက်တဲ့ ပက်ထရစ်ရှာရဲ့ ပုံရိပ်ဆန်းများ
By Shwe BaPosted on January 14, 2021 January 14, 2021
နိုင်ငံခြား သူလေး အလား ထင်မှတ် မှားသွားရ လောက်အောင် ညှို့ငင် ဆွဲဆောင်မှု အားပြင်းလွန်းပြီး ပုရိသ တွေရဲ့ တစ်ခဲနက် ဝန်းရံ အားပေးမှု တွေကို ရရှိ ထားသူက တော့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး ချောလေး ပက်ထရစ်ရှာ ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ သူမ ဟာ အသက်(၁၄) နှစ် အရွယ် လောက် ကတည်း က အနုပညာ လောက ကို စတင် ဝင်ရောက် လာခဲ့ပြီး ကြော်ငြာ လေးတွေ ရိုက်ကူး ရာမှ တစ် ဆင့် ပရိသတ် သတိထားမိ လာ တာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။ ပက်ထရစ်ရှာ ဟာ ဇာတ်ကား ရိုက်ကူး တဲ့နေရာမှာလည်း အပို လို မရှိ ကွက်တိ ကျအောင် သရုပ်ဆောင် နိုင်တာကြောင့်လည်း ပရိသတ် တွေက ချစ်ပြီး ရင်း ချစ်နေ ကြတာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။
သူမ ဟာ လတ်တ လောမှာ တော့ ကြော်ငြာလေး တွေ နဲ့ Photo Shooting လေးတွေ သာ ရိုက်ကူး နေရတာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။ ရှာရှာ ဟာ Vintage ပုံစံ လေးတွေ ရိုက်ကူး နေရတာ ကို သဘောကျ နေပြီး အများနဲ့ မတူတဲ့ ဆန်းသစ် ထားတဲ့ ခပ်မိုက်မိုက် ပုံရိပ် လေးတွေကို လူမှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာ မှာ အမြဲ တင်ပေး လေ့ ရှိတာလည်း ဖြစ် ပါ တယ် ။ သူမရဲ့ လှုပ်ရှားမှု တွေတိုင်း ကိုတော့ ပရိသတ် တွေက အမြဲစောင့် ကြည့် အားပေးနေ ကြတာ လည်း ဖြစ် ပါ တယ် ။
မနေ့ည ကလည်း ပက်ထရစ်ရှာ ရဲ့ Facebook Page တွင် အမိုက် စား ပုံလေး တွေ တင်ထား တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ သူမဟာ တလက်လက် တောက်ပနေတဲ့ အမိုက်စားဖက်ရှင် လေးကို ဝတ်ဆင် ထားပြီး ဖွံ့ထား လှပလွန်းတဲ့ ပင်ကိုယ် အလှတရားတွေက မျက်စိပြူးသွား ရလောက်အောင် ပေါ်လွင်နေ တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ” မိန်းကလေး များ restrooms သွားရင်း မှန် အကြီးကြီး တွေ့သော အခါ … ” ဆိုပြီး ရေးသား ထားတာ ပဲ ဖြစ် ပြီး ပရိသတ်တွေ လည်း ကြည့်ရှု နိုင်အောင် ပက်ထရစ်ရှာရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေး တွေကို တစ်ဆင့် ပြန် လည် ကူးယူ တင်ဆက် ပေး လိုက် ရပါတယ် နော် … .
source and photo crd : Sue Sha Naing ’ s Facebook Page
နိုင္ငံျခား သူေလး အလား ထင္မွတ္ မွားသြားရ ေလာက္ေအာင္ ညႇို႔ငင္ ဆြဲေဆာင္မႈ အားျပင္းလြန္းၿပီး ပုရိသ ေတြရဲ့ တစ္ခဲနက္ ဝန္းရံ အားေပးမႈ ေတြကို ရရွိ ထားသူက ေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသမီး ေခ်ာေလး ပက္ထရစ္ရွာ ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ သူမ ဟာ အသက္(၁၄) ႏွစ္ အရြယ္ ေလာက္ ကတည္း က အႏုပညာ ေလာက ကို စတင္ ဝင္ေရာက္ လာခဲ့ၿပီး ေၾကာ္ျငာ ေလးေတြ ရိုက္ကူး ရာမွ တစ္ ဆင့္ ပရိသတ္ သတိထားမိ လာ တာ လည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ပက္ထရစ္ရွာ ဟာ ဇာတ္ကား ရိုက္ကူး တဲ့ေနရာမွာလည္း အပို လို မရွိ ကြက္တိ က်ေအာင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ နိုင္တာေၾကာင့္လည္း ပရိသတ္ ေတြက ခ်စ္ၿပီး ရင္း ခ်စ္ေန ၾကတာ လည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။
သူမ ဟာ လတ္တ ေလာမွာ ေတာ့ ေၾကာ္ျငာေလး ေတြ နဲ႔ Photo Shooting ေလးေတြ သာ ရိုက္ကူး ေနရတာ လည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ရွာရွာ ဟာ Vintage ပုံစံ ေလးေတြ ရိုက္ကူး ေနရတာ ကို သေဘာက် ေနၿပီး အမ်ားနဲ႔ မတူတဲ့ ဆန္းသစ္ ထားတဲ့ ခပ္မိုက္မိုက္ ပုံရိပ္ ေလးေတြကို လူမႈ ကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာ မွာ အျမဲ တင္ေပး ေလ့ ရွိတာလည္း ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ သူမရဲ့ လႈပ္ရွားမႈ ေတြတိုင္း ကိုေတာ့ ပရိသတ္ ေတြက အျမဲေစာင့္ ၾကည့္ အားေပးေန ၾကတာ လည္း ျဖစ္ ပါ တယ္ ။
မေန႔ည ကလည္း ပက္ထရစ္ရွာ ရဲ့ Facebook Page တြင္ အမိုက္ စား ပုံေလး ေတြ တင္ထား တာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ သူမဟာ တလက္လက္ ေတာက္ပေနတဲ့ အမိုက္စားဖက္ရွင္ ေလးကို ဝတ္ဆင္ ထားၿပီး ဖြံ့ထား လွပလြန္းတဲ့ ပင္ကိုယ္ အလွတရားေတြက မ်က္စိျပဴးသြား ရေလာက္ေအာင္ ေပၚလြင္ေန တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ” မိန္းကေလး မ်ား restrooms သြားရင္း မွန္ အႀကီးႀကီး ေတြ႕ေသာ အခါ … ” ဆိုၿပီး ေရးသား ထားတာ ပဲ ျဖစ္ ၿပီး ပရိသတ္ေတြ လည္း ၾကည့္ရႈ နိုင္ေအာင္ ပက္ထရစ္ရွာရဲ့ အမိုက္စား ပုံရိပ္ေလး ေတြကို တစ္ဆင့္ ျပန္ လည္ ကူးယူ တင္ဆက္ ေပး လိုက္ ရပါတယ္ ေနာ္ … .
ရင်ခုန်စရာ ညအိပ်ဝတ်စုံလေးနဲ့ အလန်းလေးလုပ်ပြလိုက်တဲ့ ဖူးပွင့်သခင်ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး
အမိုက်စားပုံစံလေးနဲ့ တကိုယ်လုံးလှုပ်ခါပြီး ပုရိသတို့အကြိုက် ကပြထားတဲ့ XMUE XMUEရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး
အောက်ပိုင်း အတွင်းသား အလှလေးတွေပေါ်လွင်အောင် ပို့စ်လေးပေးပြီး ရိုက်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုကိုချပြလိုက်တဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ
Previous post ကိတ်လွန်းတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကို ဆက်ဆီကျကျနဲ့ အမိုက်စားကပြ လိုက်တဲ့ ပုရိသတို့အချစ်တော် နန်းမွေစံရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
Next post ထင်ပေါ်လွန်းတဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှတွေနဲ့ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ခေးကြီးလုကတော့ ပရိတ်သတ်တွေ အံ့သြသွားအောင် သူမရဲ့ အလှတရားတွေကို ချပြလိုက်ပြန်ပြီ